Shina 1325 spindle efatra miaraka amin'ny orinasa linear ATC sy mpanamboatra | JCUT
1. Manapaka, mijokoana, manapotika, maka sokitra (modely tsotra). Ireo dingana efatra dia azo ampiasaina ho an'ny fananganana kabinetra sy ny fanoratana varavarana kabinetra. Mampiasa ny programa fanovana fitaovana mandeha ho azy mandroso, ny fandaharana dia mandeha ho azy ireo fepetra takiana tsy misy fidirana an-tsehatra. Spindles marobe dia miasa miaraka, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana amin'ny fomba mahomby.
2. Vita amin'ny latabatra adsorption banga, ny paompy banga dia afaka mitaky tsara ny fitaovana adsorb amin'ny habe isan-karazany, ary ny vokatra adsorption dia tsara. Tsy ilaina ny manamboatra ankafizinao ny takelaka, izay manatsara ny fahombiazan'ny asa.
3. Vitao ny motera servo, ny fitaovam-piadiana avo lenta ary ny fiara mpitondra entana, izay mahatonga ny milina mihazakazaka tsy misy feo, miaraka amin'ny feo malefaka, haingam-pandeha haingana ary avo lenta. Ary ny rafi-pandrefesana mandeha ho azy dia afaka mihazakazaka sy mikosoka azy tsara arakaraka ny fotoana mba hahazoana antoka ny fanodinana ny làlam-pandrefesana làlam-pandeha mihetsika ary manitatra ny fiainam-panaon'ny milina.
4. Ny fitaovan'ny milina dia manisy endrika gantry goavam-be ho an'ny fitsaboana fitsaboana fihenjanana be loatra mba hahazoana antoka ny fanovana kely, ny fahatokiana tsara, ny tanjaka avo, ny tanjaka avo ary ny fampiasana maharitra mandritra ny fotoana tsy misy fiovana, ny hetsika. fampiasana tsy misy fiovana.
5. Amin'ny alàlan'ny fandaharam-pivarotana fiovana mandeha ho azy mandroso, ny fandaharana dia mandeha ho azy ny fepetra fanamboarana tsy misy fidirana an-tsehatra. Spindles marobe dia miasa miaraka, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana amin'ny fomba mahomby.
6. Mampiasa ny fahatsiarovana herinaratra mba hiantohana fa ny fanodinana dia mety hitohy amin'ny lozam-pifamoivoizana (antsy tapaka) na amin'ny andro manaraka.
Ny ivon-trano fanovana milina fanovana dia mety ho an'ny indostrian'ny asa vita amin'ny hazo toy ny fanaka panaka, varavarana kabinetra, fanaka birao, fanaka manokana ary ny indostrian'ny trano. Takelaka azo tanterahana: takelaka misy takelaka maro, tabilaim-paritra, tabilao ekolojia, tabilao efamira, tabilao ary zana-kazo maro samihafa. Ny milina dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny indostria isan-karazany, toy ny fanaka panaka, ny lambam-bolan'ny kabinetra, ny fanaka biraon'ny birao, ny fanaka manokana, ny takelaka solosaina, ny fitenenana hazo, ny fanaka hazo an-dakozia, sns.
Longteng fanintelony R10 linear ATC + Heads cnc efatra
1220 * 2440 * 200mm （manohana ny halavan'ny 2800 namboarina）
Rafitra LNC any Taiwan
Previous: ATC hazo cnc 1325
Manaraka: Wood router atc